Shuruuc muhiima oo magangalya doonka la xiriira oo ey EU gaartey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxooti ku soo socda Yurub. sawir: KBV 001
Shuruuc muhiima oo magangalya doonka la xiriira oo ey EU gaartey
La daabacay torsdag 19 oktober 2017 kl 11.05
Baarlamaanka midowga yurub ayaa maanta haa ugu codeeyey sharciyo cusub oo magangalyo doonka la xiriira ayna ka mid yihiin in dalalka midowga yurub khasab looga dhigo qaadashada qaxootiga uga soo aada dalalkaas saami qeybsiga qaxootiga ee dalalka midowga Yurub.
Cecilia Wikström oo ka tirsan xisbiga Libaraal-ka, isla markaana xubin ka ah baarlamaanka midowga Yurub ayaa ah qofka dawrka ugu weyn arrinkaan ka soo qaatey, waxayna tiri iyadoo arrinkaas ka hadleysa :
- Waxaan qeyb ka ahaa wadahadalo isdaba joog ah oo ilaa iyo 21 kulan kor u dhaafaya, garabyada iyo xisbiyada baarlamaankuna, bidix iyo midigba hawshaan wey ka soo wada qeyb qaateen taasina waa mid taariikhda galeysa, ayey tiri Cecilia Wikström.
Dulucda ugu weyn ee uu go’aankaani xanbaarsan yahay ayaa ah in soogalootiga qaaradda yurub soo gala si siman loogu kala qeybiyo dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub.
Baarlamaanka yurub ayaa raba in dalkii fulinta sharciyadaan ka caga jiida, laga jaro lacagaha uu ururka midowga Yurub dalalkaas dhaqaalahooda ku kabto.
Wadamada bariga Yurub ayaa intii muddo ahba waxay ka caga jiidayeen in midowga yurub uu hirgaliyo sharci dalalkaas ku khasbaya in ay qaataan qeybta soogalootiga uga soo aada saami qeybsiga dalalka midowga yurub oo dhan u dhexeeya.
Sharciyadaan cusub ayaa faa’iida weyni waxay ugu jirtaa dalkaan Sweden sida ay sheegtey Cecilia Wikström, waxayna tiri iyadoo arrinkaas ka hadleysa:
-Sanadkii 2015-kii waxaa dalkaan Sweden soo galey soogalooti rikoorka jabiyey oo dhammaa 163 000 oo qof, haddii afkaarta maanta aan soo bandhigey ay markaas shaqeyn laheyd , waxaa dalkaan Sweden xilligaas ku soo aadi lahaa oo kaliya 40 000 oo qof, ayey tiri Cecilia Wikström.